Laanta socdaalka: ” Sadex ka mid ah afartii qof ee dhalaanka keli socodka ah da’doodu waa ka weyn tahay 18″ | Somaliska
Laanta socdaalka: ” Sadex ka mid ah afartii qof ee dhalaanka keli socodka ah da’doodu waa ka weyn tahay 18″
Baaritaanadii xagga daaweeynta sharciga ah ee lugu baarayey da’da dhalaanka keli socodka ah ayaa qeyb ka mid markii ugu horeeysay la soo bandhigay. Natiijadduna waxaa ay notay in badan oo dhalaanka kali socodka ka mid ah ay da’doodu ka sareeyso 18 jir.
Laanta socdaalka ayaa waxaa ay waaxda daaweynta sharciga u direen dad dhalaan gaaraya 1442 oo 581 ka mid ah la durbo la soo dubiyey. Natiijadana ma eeysan noqon mid la yaab ku noqota laanta socdaalka oo awalba aannu qiimeeyn karin da’da saxda ah ee dhalaankaasi.
Daniel Salehi waa madax ka tirsan laanta socdaalka waxaa uu sheegay in badan oo dhalaankaasi ka mid ah marka ay magangalyo weydiisanayaan dowladda Iswiidhan eeysan sheegin da’dooda saxda ah. Balse warbixintii qiimeynta ee waaxda daaweynta sharciga shaaciyey aanu aheyn mid ay la yaabaan.
“Baaritaanka daaweeynta sharciga ayaa la adeegsadaa oo keliya marka laanta socdaalka cadeeymaha cadeeymaha yaala uusan noqon kuwo aan dhameeystirneyn.” ayuu yiri Salehi isagoo hadalkiisa sii daba dhigay in haddii dhalaanka keli socodka ah la marsiin lahaa marka hore baaritaan da’da ay dhici laheyd in diimo xoogan ay iman laheyd. Baaritaanada haatan la shaaciyey oo weli qabyo ah ayaa dhawaan la filayaa in marka la dhameeyo dib loogu celiyo laanta socodaalka oo iyagana dib u eegis ku sameeyn doona.
Dhinaca kale Ann Lemne waa mdax ka howlgala waaxda daaweeynta sharciga ah waxaa ay sheegtay in dhinacooda ay sax u aragto natiijada baaritaankooda ay sameeyeen. Waxaana ay hoosta ka xariiqday ineeysan jirin hab si sax u sheegaya da’da dhalaankaasi balse ay labado dariiqo aad u haboon oo ay adeegsadeen ay ku qiimeeyeen. Ugu dambeyntiina laanta socdaalka ayaa 4 200 oo ruux oo dhalaanka keli socodka u gudbiyey waaxda daaweeynta sharciga si da’dooda qiimeyn iyo baaritaan loogu sameeyo.
Dumarka oo noqday kuwa ugu badan ee loogu diido sharcigga daganaanshaha dalalka waqooyiga Yurub